Haweeney Soomaali oo lagu soo oogay dilka wiil yar oo ay Ayeeyo u ahayd – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Foos Cabdi Xaashi oo 70-jir ah ayaa waxaa Jimcihii la soo dhaafay la soo taagay Maxkamad ku taalla magaalladda San Jose ee Gobalka California ee dalka Maraykanka, iyadoo lagu soo eedeeyey dilkii wiil 3 jir oo ay Ayeeyo u ahayd, waa sida hadalka loo dhigay.
Boliska Degmadda Milpitas ee isla Gobalka California waxay sheegeen inuu falkaasi dhacay maalintii Isniinta ee isbuucii hore, kadib, markii laga so owacay Telefoonks 911, waxayna sheegeen inuu ilmaha yar hal saac kadib ku geeriyooday Isbitaal ku yaallaa Degmadda Milipitas oo ku taalla Koonfurta magaalladda San Faransiisko.
Gabar la dhalatay wiilka geeriyooday oo lagu magacaabi jirey Ayuub waxay u sheegtay Boliska inay daawanaysay markii ay Ayeeyada wiilka yar dhulka ku tuurtay.
Ayeeyada waxay Boliska u sheegtay inuu wiilka yar hunqaacayey, kadibna uu geeriyooday, markii ay sarriirta seexisay, si uu u nasto.
Shabakadda Wararka ee AB7 News ayaa qortay in Foos Cabi Xaashi lagu soo oogay dilka ilmahaasi oo ah heerka 1-aad ee fal-dembiyeedka dilka.
Dacwad-ooge Luis Ramos waxa uu dhegeysiga Dacadaasi ee Jimcihii la soo dhafaay waxa uu tilmaamay in caddaymaha ay hayaan u muuqdaan inay Ayeeyada ka dambeysay geerida wiilka yar ee la oran jirey Ayuub, waa sida hadalka loo dhigay.
Foos Cabdi Xaashi oo uu Turjumaan u fasirayey dacwadaha lagu soo oogay way ka gaabsatay inay qirato eedeymaha loo haysto.
Garsooraha waxa uu dib u dhigay dhegeysiga dacwadaasi oo dib loo qaadi oono bisha soo socota ee May 8-da, waxayna muteysan kartaa Xabsi 25-sanno, haddii lagu helo dilka wiilka yar ee ay Ayeeyada u ahayd.
Maamulka Puntland oo Amray Hirgelinta iyo fulinta Xeerka kufsiga